मदन राई को हो ? आजसम्म के-के काम गरे ? «
मदन राई को हो ? आजसम्म के-के काम गरे ?
प्रकाशित मिति : २३ आश्विन २०७५, मंगलवार १८:००
बेलायतबाट २०३७ सालमा एम.एस्सी. गरेर फर्केपछि देश विकासमा गहिरो चासो बढ्दै गयो । राजासँग हिँडेका औंठाछाप मन्त्रीहरूको बेढङ्ग देखेर भित्रभित्रै प्रश्न उठ्थ्यो, के नेपालमा पढेका मानिस छैनन् र, जनताको समय अनुकूल सेवा गर्ने ? । यसैबाट मेरो मनमा उम्रेका भावनाहरुलाई समेट्दै मँैले ढिलोचाँडो राजनीतिमा भाग लिनु पर्छ भन्ने अठोट गरेँ । २०३८ सालमा रतन्छाको लामीदुवालीमा ५ दिने जिल्लाव्यापी कृषि मेला र विभिन्न फिल्म प्रदर्शनी गरेर समाजसेवाको प्रत्यक्ष थालनी गरेको हुँ । यो काम गर्न त्यसबखत सजिलो थिएन । खोटाङ जिल्लाको लामीडाँडा, दिक्तेल, दोर्पा, रतन्छाका सर्वसाधारणहरुलाई फिल्म देखाउने पहिलो व्यक्ति मै थिएँ होला त्यस बखत । म त्यस बखत मुस्ताङकै जागिरमा थिएँ । २०४३ को राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावको लागि मैले २०४१ साल चैत्रदेखि नै जागिर माया मारेर भोट माग्न आएँ खोटाङ । सोलुको फाप्लुमा हवाईजहाजबाट उत्रेर खोटाङको उत्तरी भेगको जलेश्वरीको डेम्लीटारको माटो ढोगेर मैले खोटाङमा भोट माग्न थालेको हुँ । ३ महिना नबिसाई ७६ गाउँमा भोट मागेको पनि ३३ वर्ष भएछ । त्यसताका लिएको शैक्षिक र विविध श्रोतको तथ्यांक निकै रोचक हुन्छ आजको सँग तुलना गर्दा । २०४३ सालको चुनाव लड्नलाई त्यस बेलाको सरकारले मेरो राजीनामा स्वीकृत गरेन । चुनाव लड्न पाइनँ । त्यति बेला खोटाङको उत्तरी भेगका केही गाउँमा मुला, काउली, बन्दा, रायो आदिको बिउ पनि बाँडेको थिएँ । पछिल्लो पटक जाँदा बाँडेको बिउबाट तरकारी राम्रो फलेको र किसानहरू खुसी भएको सुनेँ । खानेकुरा बाँड्नुभन्दा खानेकुरा उब्जाउन सहयोग गर्नु बढी लाभकारी हुने उखानलाई आत्मासात् गरी धेरै पटक विभिन्न किसिमले खोटाङका घरघरमा विभिन्न खाले बिउ वितरण गरेर सन्तुष्टि लिएँ ।
२०४५ सालमा मलाई संयुक्त राष्ट्र संघको एफ.ए.ओ.मा जागीर मिलेपछि मेरो तलब र भत्ताको रकम मेरो कल्पना भन्दा बाहिर लाग्थ्यो । सुरु जागीरमै महिनामा कम्तीमा २ लाख रुपियाँ बच्थ्यो । पछिल्लो समय इराकमा काम गर्दा त महिनामा झन्डै १० लाख सम्म बच्थ्यो । यहाँ भत्ता धेरै पाइन्थ्यो । त्यसबेला काठमाडौँमा रोपनीको ५० हजार देखि एकलाख सम्ममा प्रशस्त जग्गा पाइन्थ्यो । मैँले मेरो आम्दानीले हजारौं नभएपनि सैयौं रोपनी जमीन काठमाडौमा किन्न सक्थें । तर जमीनको हदबन्दी र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आयोभने जग्गा सरकारी हुन्छ भन्ने अन्योलले करीब २५ रोपनी जतिमात्र काठमाडाँैमा किनेँ । जमीन जफत भए होस देशैभरी जमीन किनेर कृषि सिकाउनु पर्यो भनेर धेरै जिल्लाहरुमा थोरथोरै भएपनि जग्गा किनेँ । त्यसताका जग्गा सस्तो भएकोले सजिलो भयो । तर पछि व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने भएपछि धेरैजसो बेचि दिएँ । कुनै बेला मलाई देशैभरी जमीन हुने खोटाङे पनि भनियो । सबै जिल्लामा त थिएन । तर धेरै जिल्लामा थियो । अहिले पनि १० जिल्लामा त छ्रंदैछ । मलाई गर्व छ मेरो नेपालको हिमाल, पहाड, चुरे र तराईमदेसको हावापानीको भूगोलमा खेती गर्ने जमीन छ । आधुनिक खेती अभ्यास गरी रहेछु धेरैजसोमा । सबैजसो जग्गा सदर मुकाम भित्रै भएकोले सस्तोमा किनेको जमीनको भाउ बढेर मूल्य धेरै भएकोछ । गोजीमा नगद नभएपनि जमीनमा म धनि भएकोछु । जग्गालाई अहिलेसम्म खेतीमै प्रयोग गरी आएकोछु । जमीनमा उब्जेको बालीको अंशपनि मैँले प्राय लिने गरेको छैन । २०२९ सालमा इटहरी चोकमा मलाई बिघाको ४ हजारमा दिएको जमीन मैँले किन्न सकिन ज्ञान नभएर । अहिले त्यो चोकको जमीन बिघाको २ अर्बमा पनि पाइन्न होला । काठमाडाँै उपत्यकाको ढोलाहिटी क्षेत्रमै ५ सय रोपनी जमीन किन्न सक्ने क्षमता हुँदा किनेको भए आज रोपनीको २ करोडकै हिसाबले पनि १० अर्बको सम्पति हुन्थ्यो होला । तर जे भयो मलाई गुनासो छैन । मैँले अवलम्बन गरी आएको सिद्धान्त “काम सिक्ने, कामगर्ने, कामबाट कमाउने, कमाएकोबाट बचाउने र बचाएको रकम नाफाहुने व्यावसायमा लगानी गर्ने” ले मज्जाले काम ग¥यो । जमीन पछि मैले आफ्नो लगानीलाई विविधिकरण गर्न केही रकम बैंक तथा वितिय क्षेत्रको सेयरमा लगानी गरेँ । केही बहुमूल्य धातुमा पनि लगानी गरेकोछु । म जस्तो जागीरदार र समाज सेवा गर्नेले उद्योग र व्यापारमा समय दिन नसक्ने भएकोले त्यी दुई क्षेत्रमा धेरै लगानी गरिन मैँले ।
संसारमा धन कमाउने मानिस गाउँदेखि शहरसम्म नेपाल देखि विदेशसम्म धेरै देखें । युरोप, अमेरिका, जापानमा छाराछोरीलाई अनिवार्य अंश दिने चलन छैन । त्यसैले त्यहाँका मानिस गरीखान योग्य छन । आमाबाबुले कमाएको सम्पत्ति समाजको भलाइको लागि वा आफूले मन पराएको मानिसलाई दिन पाउने चलन छ । समाजबाटै कमाएको प्रायः जसो धनीहरुको पैसा घुम्दै फिर्दै समाजभित्रै पुग्नेगर्छ त्यी देशहरुमा । तर नेपालमा त ७ पूस्ता सम्मलाई आफूले नखाई–नखाई अंश कमाई दिने चलन आज सम्म छ । यो चलनले नेपालमा तिन ठूला बिकृति ल्याएको छ । पहिलो भ्रष्ट्राचारले देशलाई डुवायो र दोश्रो अनुत्पादक, अल्छी र अहंकारी नागरिकको बिगबिगी बढेर गयो । तेश्रो अंशमा अति ठूलो भाई कलह । यसैलाई देखेर मैँले मेरा दुईछोराहरुलाई राम्ररी शिक्षा लेउ । खेलेर खाएर पनि तिमीहरुको शिक्षामा लगानी गर्छु । तर अंश भन्ने कुरा दिदै दिन्न भनेर सानै देखि सुनाउँदै आएँ । आज त्यसले काम गरेको छ । दुवै छोरा बकाइदा गरी खाने भएकाछन् । मैले पनि बाउको केही लिइँन । बरु बाउलाई गर्नुपर्ने कर्तव्य राम्रै गर्न सके जस्तो लाग्छ । अंश नलिई पनि म गरीब भइँन । भोकै मरीन । न मेरा छोराहरु नै भोकै परे ।
राजनीति गर्न थालियो । गरेर पनि देखाई सकिएकै हो । पढाइको त के कुरा । भारत जस्तो संसारकै ठूलो देशबाट बि.एस्सी., बेलायत जस्तो सामाज्य चलाएको देशबाट एम.एस्सी. देखि युरोप, अमेरिका, जापानसम्म विभिन्न विषयमा विश्वविद्यालय धाएको मान्छे म । मेरो नाती सरहको ८ पास नभएको फुच्चाफुच्चीहरुले तपाईलाइ राजनीति आउँदैन । तपाईले राजनीति शास्त्रै पढेको छैन के राजनीति गर्नु हुन्छ? किर्सी (कृषि भन्न पनि नजान्ने) पढेकोले राजनीति जान्दछन र भनेर जहिले पनि हेपी रहने । सारै भएपछि ए, यो राजनीति शास्त्र के रै छौ भनेर मेरै भाईछोराहरुलाई एम. ए. को पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ल्याइमागें । ३ दिन लगाएर पहिलो र दोश्रो वर्षको पाठ्यक्रम हेरेको त खासै केही जस्तो लागेन । एक वियाषलाई बढिमा ५ दिन पढेंभने पास गर्छु जस्तो लाग्यो । टि.यु.मा भर्ना गरी दिए भाईसाथीले । २ वटा कक्षापनि लिन गएँ । आफुभन्दा कान्छाहरु र आफुलाई चित्तै नबुझ्नेगरी पढाएको देखेपछि र समयपनि नभएकोले क्लासै गइन । जाँच आउने बेलामा भाईछोराहरुले नै अंकल जाँच आउन लाग्यो भनेर भनेपछि एउटा विषयलाई ढुक्क साढे तिनदिन जति पढेर जाँच दिएँ । राम्ररी नै पास भएँ । राजनीति शास्त्रमा जम्मा ३३ दिन पढेर पास गरेपछि बल्ल त्यी ८ फेलहरुलाई भन्न सजिलो भयो । उनीहरु बोल्नै छोडे त्यो थाहा पाएपछि । अब अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र र ग्रामिण विकासमा पनि एम. ए. गर्नु प¥यो भनेर पाठ्यक्रम र पुस्तकहरु किनेर ल्याउनु लगाएँ । पढेंपनि । तर यी तिनै कुरा त मैँले जमानामा बि.एस्सी. र एम.एस्सी. गर्दै पढि सकेको रहेछु। ग्रामिण विकासमा त सफतासाथ देशको कामै गरेको । अर्थशास्त्रले धन कमाउन सिकाउने कुरा आफै धनी भएर देखाई सकेको भनेर केही विषय जाँच दिएर छाडी दिएँ । प्रमाण पत्र नै थुपार्न चाहेको र नियमले मिल्ने भए वर्षदिनमा म ५ विषयमा एम. ए. पास गर्छु भन्ने लाग्छ मलाई नेपाली पढाई हेर्दा । त्यसैपनि अनेक विषय अध्ययन गरेको प्रमाण पत्रहरु नै ३ किलो छन् मसंग । अरु किन र के का लागि । ८ फेलका लागि त एस. एल. सी. नै काफी छ भनेर मैले थप प्रमाण पत्र लिएर समय खेर नफाल्ने निधो गरें ।
२०४६ साल पछि बनेका विभिन्न दलहरुको कृयाकलाप हेरेपछि नेपालमा साँचिकै लोकतन्त्र मान्ने दलहरु नबनिसकेको जस्तो लाग्यो । राणा परिवार र शाह वंशले सिकाएको सामन्ती राजनीतिक संस्कार दलहरुमा सरेको जस्तो लाग्यो । भन्ने लोकतन्त्र, गर्ने चाकरी र चाप्लुसी तन्त्र । २०५६ सालको सुरुसम्म नेपाली कांग्रेसलाई गहिरीएर अनुभवगर्दै अनुशासित सदस्यको नाताले काम गरीरहेँ । नेताहरु गिरीजाबाबु र किसुनजीसँग नजिक बसेर कामगर्न कोशिस गरियो । माया नपाएको पनि होइन नेताहरुको राजाको पालामा जस्तै । गाउँदेखि केन्द्रसम्म, साधारण सदस्य देखि सभापतिसम्म धेरै नजिकबाट नियालेर हेरेपछि नेपाली कांग्रेसमा देश बनाउने सदिक्षा र सीप भएको मानिस अतिनै कम पाएँ । प्रचण्ड बहुमत कार्यकर्ताहरु पदको लागि जेपनि गर्ने देखियो । म त नेपालको विकास गर्ने भनेर विदेशबाट कस्सिएर नेपाल आएको । झन्डै एक दशक कामगर्दा कांग्रेसभित्र विकासको ‘व’ सम्म गम्भीर भएर उठाउने कोही देख्न नसक्दा मलाई असजिलो लागेको थियो । राजा बीरेन्द्रसँग १६ बर्ष पञ्चायत शासनमा कामगर्दा चाकरी र चाप्लुसीको पराकाष्ठ देखेको मानिस नेपाली कांग्रेसमा त पञ्चायतको बाजे पो देख्न प¥र्यो चाकरी र चाप्लुसीको । किन यस्तो हुन्छ त भनेर भित्री कुरा खोतल्दा त दलभित्र नै लोकतन्त्र देखिदैन रहेछ । भन्ने लोकतन्त्र, खोज्ने चाकरीतन्त्र रहेछ । राणा र राजाले जस्तै दलका नेताले टिका लगाएर पदको पंजनी गर्ने दलको विधानले सबै कार्यकर्ता पद पाउनका लागि नेताको वरिपरि घुमिझुमी रहने । राजाको पालामा राजाको अगाडी जिउ छाडेर “सरकार म सेवक सरकारको भक्त हुँ मलाई मन्त्री, अञ्चलाधिस बनाइ बक्सियोस भने झैं कांग्रेसमा पनि गिरीजाबाबु, किसुनजी मैले ७ साल, ३६ साल र ४६ मा आन्दोलन गरें, हतियार उठाएँ, जेलनेल परें मलाई अब पद चाहियो, सांसद मन्त्री चाहियो” भनेर भीड गर्नेहरुले रातदिन घेरि राखेका हुन्थें । म त युरोप अमेरिकाको लोकतन्त्र भोगेको मान्छे । राजाको निरङ्कुश शासन भोगेको मान्छे र लोकतन्त्र ठिक छ भन्ने र विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेको लागि त नेपाली कांग्रेसको छदम लोकतन्त्र त पटक्कै ठिक लागेन । नेकपा एमाले लगायत कम्युनिस्ट पार्टीहरुको त के कुरा । त्यी पार्टीमा काम गर्ने नेताहरु नै सयौ वर्ष अघिको माक्र्स र लेनिनको मिति गुज्रेका कुरा घोकेर आफै भ्रममा बाँचीरहेका र जनतालाई पनि भ्रम छरीरहेका हुन्थे । सबैदलहरुको कार्यशैली र विधान हेरेपछि लाग्यो कि नेपालका कुनैपनि दलको विधान पूर्ण लोकतान्त्रिक छैन् । त्यसैले चाकरी, चाप्लुसी, भ्रष्टाचार र गूट–उपगूटले बढावा पाइरहेको छ । कार्यकर्ता नेताको नोकर र मतदाता कार्यकर्ताको दासजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास भइराखेको महशुस हुन्थ्यो । चाकरीले सीपालु र इमानदार व्यक्तिले काम नपाउने । सिपालु र इमानदार मानिस चाकरी नगर्ने । नेताले असल मानिस नखोज्ने । भ्रष्ट, अयोग्य, गुण्डा प्रवृत्तिको मानिसहरुको बाहुल्य हुने गरेकोले देशको विकास र शुशासन खाल्डोमा पर्दै गएको देखेर धेरै चिन्ता लाग्थ्यो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरु मासबेस्ड हुन्छन । तर नेपालमा त नेपाली कांग्रेस जस्तो दल नै मासबेसबाट कम्युनिस्ट र पञ्चायतको सिको गरेर क्याडर बेस्ड भयो । क्याडर बेस्ड प्राणालीमै हो भ्रष्टाचार र चाकरीले देशलाई समाप्त गर्ने । नेपालमा नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्टबाट क्याडर चलाउन सिके भने कम्युनिस्टहरुले कांग्रेसबाट विलासी जीवन बिताउन सिके । दुवैले राणा र राजाबाट सामन्ती हुन सिके । यसरी सबैले नेपाल डुबाउन मात्र सिके जस्तो लाग्छ मलाई । कामकुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिर भनेझैं । नेपालमा दलभित्रै पूर्ण लोकतन्त्र भएको र प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकारको व्यवस्था नभएसम्म देशको विकास नहुने निक्र्योल गरेर मैले नेपाली कांग्रेस २०५६ सालमा परित्याग गरेर संसदको चुनावमा स्वतन्त्र उमेदवार भएर भाग लिएँ । खोटाङे जनताले दिनुभएको सम्मानजनक मतले मलाई धेरै उत्साही बनायो ।
२०५६ को निर्वाचन परिणामपछि नेपालको समृद्धिको लागि नयाँ सोच भएको र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने दलको आवश्यकता महशुस गरेर नयाँ दलखोल्न प्रयासमा लागें । आर्थिक सम्पन्नता भयो भने अधिकार र पहिचान कसैकोपनि कसैले खोस्न सक्दैन भन्ने विश्वास राख्ने मान्छे म । नयाँ दल खोल्ने प्रयासमा मैले देशका नाम चलेका सबैजसो नेता, विद्वान, विज्ञ, उद्योगपति, व्यापारी, पूर्व कर्मचारीहरुसंग भेट्ने काम गरें । त्यतिबेला जनयुद्धको मध्ये अवस्था भएतापनि डा.बाबुराम भट्टराईलाई पनि उनको विचार र कर्मको महानता देखेर म सम्झना गर्थें । राजसंस्था खेदेपछि यिनले पनि नेतृत्व गरीदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो । मैले राजासंग काम गर्दापनि राजा मानिसको रुपमा ठिक भएपनि शासनप्रणालीको रुपमा राजसंस्था ठिक नभएको ठहर गरेको हुँ । बाबुरामजी जतिको विद्वानले ज्यान मायामारेर राजसंस्थाको समाप्तिमा लाग्नु नै ठूलो विचार र कर्म हो भन्ने लाग्छ मलाई । मैँले शिक्षाकै शिलशिलामा जापानमा हुँदा जापान कसरी यति चाँडो विकास भयो भनेर जिज्ञासा राख्दा त्यहाँको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (Lebaral Democratic Party-LDP) को परिकल्पना, स्थापना र नेतृत्वको कारण हो भन्ने बुझेको थिएँ । सन १९४५ देखि १९५५ सम्म जापानमा पनि राजनीतिक अस्थिरताले निकै पिरोलेको रहेछ । दोश्रो विश्वयुद्धको पराजयको कारण अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको र राजनीतिक अस्थिरताले जापानी जनता आजित भएको बेला १९५५ मा जापानका विभिन्न दलका मनमिल्ने नेता, उद्योगी व्यवसायीहरु, अर्थशास्त्री लगायत विषय विज्ञहरु र पूर्व कर्मचारी प्रशासकगरी ४ समूहका मन मिल्ने जापानीहरु मिलेर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) खोलेर निरन्तर ३० वर्ष सरकार चलाएर जापानलाई संसारकै धनी देश बनाई दिएको रहेछ । के यस्तो नेपालमा हुन सक्दैन र ? भनेर म रातदिन आजपनि सोची रहन्छु । २०५६ सालदेखि २०७२ साल सम्म प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने र समृद्धिलाई मूल एजेन्डा बनाउने दलखोल्न चारवटा प्रयास गरें । सफल हुन सकिँन । कसैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई बुझाएर मन्त्री भए कसैले माक्र्सवादको धङ्धङीमै अल्झेर बस्ने, कसैले समृद्धि होइन संकिर्ण विचारमै सिमित भए । मैँले कसैसंग लाग्न सकिन विचारको कारणले । यतिकैमा डा.बाबुराम भट्टराइले नयाँ शक्तिको आवश्यकता बारे लेख प्रस्तुत गरे । नयाँ खाले वैकल्पित राजनीति कसरी र किन गर्ने भनेर एउटा पुस्तिका नै प्रकाशन गरे । नयाँ शक्ति निर्माणगर्न दलमात्र छाडेनन् खाइपाई आएको सुविधा र सम्मानयुक्त सांसद पदै त्यागे । पद त्यागीसकेपछि धेरै सभाहरु गरे । हामी जस्तो सीपयुक्त र इमानदार विज्ञहरुलाई खोजे । बोलाएर छलफल गरे । मैले पनि धेरै पटक छलफल गरें । मेरो सपना र विचार सुनाएँ । मैले दशकौं देखि कल्पना गरेको र अभ्यासमा लागेको कुरा उनकोसंग ठ्याक्कै मिलेपछि उनले मलाई छाड्ने भएनन् । म पनि प्रभावित भइसके तापनि उनको पुरानो माओवादी दलबाट आउने सहयात्री र परिवारको बारेमा शंका मेटाउन धेरै छलफल गर्नु पर्यो । नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा सबैभन्दा धेरै जान्ने रामेश्वर खनालजी पनि संगै हुनुपर्छ भन्ने म । खनालजीको पनि बाबुरामजी प्रति शंका होइन तर उनको पुरानो माओवादी सहकर्मी र परिवारकै बारेमा थियो ठूलो शंका । हामी दुवैसंगको छलफलमा बाबुरामजीले पुरानो सहकर्मी र परिवारको समस्यालाई हामीले प्रस्ताव गरे अनुसार म्यानेज गर्ने सर्तमा हामी नयाँ शक्ति दल बनाउने कुरामा सहमत भयौं । २०७२ साल माघको १० गते ३५ जनाको केन्द्रीय परिषद घोषणा गरियो । जापानको LDP जस्तै नयाँ शक्तिमा सामेल हुने ३५ जनामा राजनीतिक दल, उद्योगी व्यवसायी, अर्थशास्त्री लगायत विभिन्न विषय विज्ञहरु र पूर्व प्रशासकहरु समावेश भएको मैँले कल्पना गरेजस्तै दल बन्यो । २०७३ जेठको ३० गते रंगशालामा भएको उद्घाटनमा ५० हजारभन्दा बढि सर्वसाधारणको उपस्थिति थियो । एकहप्तामा ४० हजार सदस्यले अनलाइन फारम भरे । ७५ जिल्लामा संगठन विस्तार सजिलै भयो । म धेरै खुसी भएँ । आजपनि खुसी छु ।
म एक मानिस हुँ जसलाई समय र श्रोत अति नै सीमित बनाइ दिएको छ प्रकृतिले । यसरी तर प्रकृतिले नै मानिसको संसार सानो बनाइ दिएको छ भन्ने ज्ञानलाई बुझेर मैले आफुले जानेको, समय र श्रोतले पुग्नेजति काम गर्न आफु जन्मेको गाउँ रतन्छालाई नै छाने । २०३० सालदेखि नै रतन्छाका युवाहरूलाइ असल शिक्षा लिनुपर्छ भनेर जुक्तिहरू सिकाउने केही आर्थिक सहयोग गरेर प्रोत्साहन गर्न थालेको हुँ । शिक्षा नै विकासको आधार हो भन्ने ज्ञान भएकाले रतन्छाको स्कुलको शिक्षण र पूर्वाधार विकासमा सकेको सहयोग गरें । हाइस्कुल र प्लस टु तथा कलेज बनाउने र तिनलाई चाहिने भवनलगायत विभिन्न भौतिक सुविधा र योग्य शिक्षकको व्यवस्थामा सक्दो सहयोग गरेको छु । सानो कक्षादेखि कलेजसम्म सैयौंलाइ छात्रवृत्ति प्रदान गरेको र आज पनि निरन्तर जारी राखेको छु । शिक्षाको गुणस्तर बढाउन विशेष छात्रवृत्ति, आपत–विपत र विकासमा सहयोग गर्न २०४२ सालमा सकेला ट्रस्ट भन्ने कोष स्थापना गरियो । सो कोषले आजसम्म काम गरी आएकै छ । यो ट्रस्ट खडा गर्दा धेरैजसो आर्थिक सहयोग त्यसताका हङकङमा कार्यरत बेलायती सेनाका रतन्छालीहरूबाट म हङकङमा हुँदा प्राप्त भएको थियो । हाइस्कुललाई प्लस टु र कलेज बनाउँदा रतन्छाको होनाहार समाजसेवी पूर्व बेलायती सेनाका भाई केशबराम राईको योगदान हामी सबैको भन्दा धेरै छ । आजभन्दा करिब २० वर्षअघि १६ लाख नगद चन्दा उठाउन चानचुने कुरै थिएन । उहाँ नभएको भए कसैको पिताम चल्ने थिएन ।
२०४३ को आम चुनावमा सहभागी हुने निधो गरेर २०४१ देखि नै खोटाङको गाउँघर घुम्न निस्किएँ । मानिसलाई एकछाक भात ख्वाएर एक दिनको पेट भर्न सहयोग गर्नुभन्दा खानेकुरा फलाउन सिकायो भने जीवनभर पेट भर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने उखानलाई मनन गरेर मैले कृषि बालीको विभिन्न खाले बिउ किसानहरूलाई बाँड्दै भोट मागें । बाँडेको बिउले घरघरमा खुसी छाएको सुनेर ज्यादै खुसी हुँदै त्यस पछि आजका दिनसम्म विभिन्न बालीका उन्नत बिउ बाँडी आएको छु । मैले २०४१ सालमा ३ महिना लगातार भोट मागेर ७६ गा.वि.स.हरु घुम्दा जम्मा ४ छाकमात्र फापरको हरियो साग खान पाएको थिएँ । आजको दिनमा खोटाङका हरेक घरमा बाहै्रमास हरियो तरकारी खान पाइन्छ । यो अवस्था ल्याउनमा किसान, सरकार, संस्थाहरू सबैको भूमिका छ तापनि हाम्रो र विशेष गरेर नाहिमा कृषि श्रोत केन्द्रको पनि प्रमुख भूमिका रहेको जस्तो लाग्छ हामीलाई । यो पटक पनि तपाईहरूको घरघरमा यो मौसममा रोप्ने मुला, मिनोअर्ली, रायो खुमल र मनकामना, केराउ सिक्किमे बिउ पठाउँदैछु । भोट दिन असहज भए पनि बिउ लगाई केही फाइदा अवश्य लिइ दिनुहोला ।
खोटाङ जिल्लाको विकासमा सबैभन्दा ठुलो विकासी आयोजना एसियाली विकास बैंक (एडिबि) को ऋण सहयोगमा संचालित माथिल्लो सगरमाथा कृषि विकास आयोजना थियो । यो आयोजना बि.स. २०४८ देखि थालनी भएर करिब ९ वर्ष चल्यो । यो आयोजना मेरै तालुक कृषि मन्त्रालयकै नेतृत्वमा बन्न लागेकोले मैँले त्यतिबेलै भनेको थिएँ मोटर सडकबिना यत्रो लगानी काम लाग्दैन है भनेर । कृषि उत्पादन बढाउने भनेर गरिएको लगानी करिब बालुवामा पानी सरह भयो भनेर मलाई यसै संस्थाका त्यसताकाका एडिबि नेपाल प्रमुख मेरा मित्रले गुनासो गरे । मैले गलत काममा गलत लगानी गर्दा प्रतिफल यस्तै हुन्छ भनेको थिएँ । सही काम त मोटर सडक बनाइदेऊ न । खेती त किसान आफँैले जेनतेन गर्न सक्नेछन् । यति भनेपछि आयोजनाको समीक्षा भयो र घोेडेटोबाटो र कृषि उत्पादनको साटो मोटर सडकमा पैसा हाल्ने निर्णय भयो । जयरामघाटदेखि दिक्तेल सम्म ७२ किमि र बिजुलेदेखि लामीडाँडासम्म १० किमि गरी जम्मा ८२ किलोमिटर वातावरण मैत्री सडक खन्न प्रयास भयो । तर जनयुद्धको समय भएकोले यो सडक पुरा नभए पनि मोटर सडकको खाका त बनेकै हो । २५ वर्ष अघि यो आयोजनामा खोटाङमा मात्र ३० करोड जति खर्च भयो होला । सडक र केही झोलुङे पुलबाहेक अरु लगानीले जिल्लाको खासै हित हुन सकेन । आम्दानी आठ आना खर्च रुपियाँ भएकै हो । ऋणको भार भने थपिएर गयो ।
यो आयोजनाको कथा रोचक छ । २०५४ सालमा निर्वाचित पूर्व सभापति पर्शुराम कार्की आज बिरामी हुनुहुन्छ । उहाँजस्तो सक्षम खोटाङे नेताको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना छ । पर्शुजीले मलाई फोन गर्नुभयो । दाई RAP प्रोजेक्ट खोटाङमा लानलाई जोड गर्न प्रोजेक्ट अफिस र DFID को अफिसमा कुरा गर्न तपाई र म जानु पर्यो भन्नु भयो । पर्शुरामजी पनि अङग्रेजी राम्रै बोल्नु हुने भए तापनि मेरो युएनको अनुभवको अङग्रेजीले थप मद्दत गर्ला भनेर उहाँले मलाई गुहार गर्नु भएको थियो । यो एक असल नेतृत्वको राम्रो गुण हो । सब कोहीले गर्दैनन् यसो । म उहाँको दलको सदस्य नभइ अर्कै दलको सदस्य थिएँ । हामी दुई पटक RAP को अफिस र एकपटक DFID को अफिस गयौं आयोजनाको थालनी अगाडि सबैकुरा बुझ्नलाई । दुवै अफिसमा मेरो चिनजानको साथीसँगी पनि भेटिए । म बेलायत पढ्दाको कुराले पनि अलिक काम गर्यो । यु.एन.को संलग्नताले त झनै काम दियो । जनताको तर्फबाट जिल्ला सभापति पर्शुरामजी र विकासको विज्ञको तर्फबाट म कुरा गर्न उभिँदा बोल्न अति सजिलो भयो । आयोजना छनौटमा ७ जिल्ला परेका रहेछन् । छान्नुपर्ने जम्मा ४ जिल्लामात्र । सदरमुकामसम्म मोटरबाटो जोडी नसकेकोले खोटाङको नाम करिब नपर्ने निश्चित हुँदै रहेछ । नाम छान्न एक घन्टा अघिमात्र हामी पुगेछौं । कुरा चल्यो । तपाईको त मापदण्ड पुगेन नि महाशयहरू भनेर बेलायती इन्जिनियर महिलाले भनिन् । के मापदण्ड ? भन्दा मोटर सडकले सदरमुकाम जोडिएको छैन भनिन् ।
साँचिकै माथिल्लो सगरमाथा कृषि विकास आयोजनाले खनेको बाटो त पुरा भैसकेको थिएन नै । मैँले फ्याट्ट जुक्ति निकालें । बाटो बनि सकेको छ पुरा गर्न थोरै मात्र काम बाँकी छ । हामी केही महिनामै पुरा गर्ने छौं । यसको जिम्मा जिल्ला सभापति र म लिन्छौं भनेर मैले भन्दा सभापति पर्शुरामजीले पनि हजुर हजुर हामी अवश्य त्यो काम गर्ने छौं भनेपछि एकछिन घोरिएर DFID इन्जिनियरले साँचिकै हो त भनिन् । हामी दुवैले एकस्वरमा हो भन्यौं । जे कागज गर्न पनि हामी तयार छौं भनेपछि लौ त ठिकै छ तपाईहरू ग्यारेन्टी लिने हो भने हामी राख्छौं । यतिकुरा सुन्दा हामी कति खुसी भयौं होला । मेरो जीवनको खुसीको क्षणहरूमा यो क्षण एक विशिष्ट किसिमको क्षण थियो । आयोजना थालियो पुरानो बाटो पनि यसैले पुरा गरी दिने भयो । दिक्तेल चखेवासम्म ४६ किमी र दिक्तेल खोटाङबजारसम्म ७० किमि गरी जम्मा ११६ किलोमिटर थप ग्रामीण सडकको ट्रयाक खन्ने काम भयो यस आयोजनाबाट खोटाङ जिल्लामा । साथै सदरमुकाम दिक्तेलभित्र र दिक्तेलबाट मनमाया राई खानीडाँडा विमानस्थल सम्मको सडक स्तरीकरणमा समेत सहयोग गरेकोछ । यस आयोजनाले समूह निर्माण, कृषि उत्पादन, गरिबी निवारणमा थप काम गरीदिएको छ खोटाङमा ।
स्वीस विकास सहयोग नियोगले दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे जिल्लामा सडक यातायात र अन्य क्षेत्रमा गरेको विकासको लोभलाग्दो प्रगतिप्रति मँैले नजिकबाट नियालेर हेर्दै आएको थिएँ । म आफै पनि यो संस्थाको परामर्शदाता थिएँ केही समय । धेरै पटक यहाँका साथीहरूसँग कुरा गर्दा यो संस्था खोटाङमा पनि लानुपर्यो भन्ने कुरा गरी रहन्थें । यतिकैमा यो संस्था दोलाखा जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा सर्दैछ भन्ने कुरा थाहा लाग्यो । कुन जिल्लामा जाने त्यसको मूल्याङ्कन गरेर हेर्ने कुरा भयो । ३, ४ वटा जिल्लाहरूको नाम आयो । तिनमा खोटाङ पनि परेको रहेछ । सौभाग्यवस यो मूल्याङ्कन गर्ने काम मलाई नै दिइयो । मैँले इमानदारीसाथ मूल्याङ्कन गरेर प्रतिवेदन पेस गरिदिएँ । प्रतिवेदनको आधारमा धेरै पटक स्थलगत निरीक्षणमा केन्द्रबाट टोलीहरू खटिए । सौभाग्यवस अन्तिम छनौटमा खोटाङ जिल्ला परेछ । यो पटक हो मेरो जीवनमा सबैभन्दा धेरै खुसी भएको छिन र दिन । खुसी यसमानेमा लाग्यो कि स्वीस सरकार दिगो र निरपेक्ष दाता भएकोले धेरै वर्ष अघिदेखि खोटाङ लाने रहर र पहल गर्दै आएको थिएँ । यो आयोजनाले कृषि, सिचाइ, सशक्तिकरण, सेफर माइग्रेसन र ग्रामीण सडक आदिमा काम गर्दै आएको छ । यो आयोजनाले ऐलेसम्म खोटाङलाई दिएको सबैभन्दा ठुलो योगदान नै मौहुरे–फोक्सिङटार ३९ किमि सडकमा करीब ८० करोड रुपिया खर्चेर मोटरेबल ट्रयाक निर्माण हो । साथै हुर्लुङदेखि ऐसेलुखर्कसम्मको केही अंशको सडक सुधार पनि अर्को ज्यादै राम्रो काम हो । यो आयोजना अरु केही वर्षसम्म खोटाङमा रहनेछ भन्ने आशा छ । USADP, RAP / SDC आयोजनाहरूबिच खोटाङमा मोटर सडक, रोजगारी र कृषि क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण र गहिरो सम्बन्ध रहेकोछ ।
विर्सनै नहुने कुरा मनमाया राई खानीडाँडा विमानस्थल बन्ने नाममा सुरुका दिनदेखि अन्तसम्म जिउज्यान छाडेर, खाजा सामल बोकेर लाग्ने दुर्गाप्रसाद घिमिरे नै हुन् । यिनले नखटेको भए यो विमानस्थल यो अवस्थामा पुग्ने सम्भावना नै थिएन न म आफै त्यति खट्न सक्थें होला ? अरु छुटाउनै नहुने नाममा समितिका सदस्य र निर्माण संयोजक मोहन खत्री जसले ठुलो जोखिम मोलेर काम थाले । धेरै गरे । तर पछि पैसामा लोभिएर धेरै नराम्रो पनि गरे । स्थानीय विकास अधिकारी प्रल्हाद पोखरेल, मन्त्रीहरू बलबहादुर केसी, प्रदीप ज्ञवाली, लोकेन्द्र बिष्ट मगर, क्यानका महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर, इन्जिनियर रत्नबहादुर श्रेष्ठ, जग्गादाता रुद्र राईको नाम छुट्दा अन्याय हुन्छ । दिक्तेल निवासी सनमान खड्काले ५० हजार सुरुमै नदिनु भएको भए जनताबाट त्यति रकम उठ्न मुस्किल हुन्थ्थो । बेलायती सेनामा कार्यरत भूमिराज राई र उहाँको टिमले काठमाडौँमा ठुलो कन्सर्ट गर्नुभो । भने जति रकम नउठे पनि उहाँको टिमले गरेको मिहेनत र प्रचार प्रशंसनीय थियो । जिल्लाका अभिभावक स्व बीरेन्द्र केशरी पोखरेलले हामी सबैलाई सधँै डोर्याउनु भयो ।